Ogaden News Agency (ONA) – Faahfahin iyo sawiro shirkii London ee lagu sameyay Human Rights Advocacy Group
Faahfahin iyo sawiro shirkii London ee lagu sameyay Human Rights Advocacy Group
Magaalada london waxaa isuguyimid shir heersare ah Qowmiyadaha Oromada, Benshangul, Sidama, Shakajo, Gambela, iyo Somalida Ogadeniya kuwaas oo ka arrinsaday sidii looga hortagi lahaa isku meelna looga soowada jeedsan lahaa tacadiyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka. Shirka kulankan la isugu yimid ayaa waxaa laga soo shaqeynayay muddo sanad ah.
Shirkan oo ka dhacay Halka weyn ee shirarka jaaliyada Ogadeniya ee London, waxaa kasooqeyb galay dad aad u tiro badan oo ka koobna waftiyo martisharaf ah oo qowmiyadahaas kor kuxusan matalayay oo kor u dhaafaya 200 xubnood oo kakala socda ururada bulshada ee Qowmiyadahaas kulankan ku bahoobay.
Waxaa shirkan furay Jaaliyada Sidama, Waxaa ku xigtay Shakajo, qowmiyada oramada, benshangul oo dhamaantood ka hadlay ahmiyada ay leedahay in la isugu yimaado kulankan iyo u jeedada ka danbeysa ee waqtigan muhiimada goonida loo siinayo midow in la helo qowmiyadahan isku baheystaa.
Somalida Ogadeniya waxaa shirkan u matalayay Mudane Xassan Macalin oo kamid ah masuuliyiinta fadhiday Panelka. Mudane Xassan ayaa Ilays TV u sheegay in u jeedada kulankan uu yahay in la helo xog rasmi ah oo ay ka mideysanyihiin dhamaan shucuubta ku hoos dulman gumeysiga Ethiopia, tacadiyadaas oo gacanta lagu hayo waxaan si wada jira ugu soo saareyna hal meel kadibna waxaan u gudbinayna maxkamadaha ay quseyso ee wax ka qabta dadka danbiilayaasha ah si maxkamad caalami ah loo soo istaajiyo. wareysiga Xassan macalin ayaa dhowaan soo gali doona shaashada ilaystv.
Jaaliyada Ogadeniya ee London oo kulankan madasheeda lagu qabtay ayaa waxaa magaca jaaliyada Ogadeniya ku hadlay, Aqoonyahan Maxamed Sheekh Maxamuud oo isagu ah masuul u ololeeya xuquuqda aadamaha. Mudane Maxamed ayaa soo bandhigay taariikhda halganka shacabka Ogadeniya gaar ahaan tacaidyada gumeysiga Ethiopia u geysan jiray shacabka Ogadeniya mudada qarniga ah iyo sida somalida Ogadeniya ugu taaganyihiin inay isaga qaadaan heeryada gumeysiga. Maxamed Sheekh Maxamuud ayaa soo bandhigay filimaan iyo muuqaalo cusub oo tusinaya magaaloyin kamid ahaan jiray dhulka Ogadeniya oo dadkii dagana waqtigan laga dhigay wax la dilay, la xidhay iyo in ka qaxday, magaaloyinkaas oo sida ka muuqata filimka ah cidla caarsira cid ku nooli jirin.
Waxaa sidoo kale gabayo luqada afka Englishka ah halkaas kasoo jeediyay laba gabdhood oo da’yar oo kaga hadlay dareenkooda iyaga oo cabiraya gumeysiga Ethiopia dhibaatada uu ku hayo somalida Ogadeniya.
Kulankan oo ay ka hadleen aqoonyahamiin badan oo kasoo jeeda qowmiyadaha Oromada, Benshanguul, Sidama, Shakajo Sidama iyo Somalida Ogadeniya ayaa waxaa la isku afgartay in lagu sameysto urur cusub oo loogu wanqalay Human Rights Advocacy Group (HRAG)
Ururkan cusub ayaa lafilaya innuu wax badan ka badali doono kahortaga iyo danbi ku oogida dadka geysta falalka ka dhanka ah Xuquuqul insaanka.